बर्जरको एटिएम अफर | गृहपृष्ठ
Home बजार बजार समाचार बर्जरको एटिएम अफर
बर्जरको एटिएम अफर
वैशाख १, काठमाडौं (अस) । नयाँ वर्ष २०७५ को अवसरमा बर्जर पेन्ट्सले “बर्जरको एटिएम अफर” योजना ल्याएको छ । नायक बिपिन कार्की र नायिका वर्षा राउत अफरको क्याम्पेन एम्बासडर रहेको यस योजनामा घरधनीले रू. ३० लाख नगद उपहार जित्न सक्ने बताईएको छ ।
बर्जर सिल्क रेन्ज, वेदरकोट अल गार्ड वा वेदरकोट एन्टि डस्ट इमल्सन्स्को खरीदमा सय वर्ग फिट सिल्क इलयुजन डिजाइन निःशुल्क पाइने कम्पनीले बताएको छ । तीन उत्कृष्ट कमर्शियल भवनहरुले ५०–५० हजार र बर्जरको फेसबुक पेजमा सबैभन्दा धेरै लाइकपाउने उत्कृष्ट घरले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने बताइएको छ ।
कसरी पाउने उपहार ?
उपहार योजनामा सहभागी बन्न घरधनीले आफ्नो घरको रङ्ग रोगन कार्य शुरु गर्नु अघि कम्पनीले उपलब्ध गराएका सम्पर्क माध्यमहरुबाट दर्ता गराउनुपर्नेछ । दर्ता पश्चात हरेक घरको लागि छुट्टाछुट्ट्ै एक विशेष दर्ता कोड फोन सम्पर्कको समयमा वा स्वचालित एसएमएस प्रणाली मार्फत् उपलब्ध गराइनेछ ।
वैशख २ गतेदेखि असार ३२ सम्म घर दर्ता गर्न सकिने कम्पनीले विज्ञप्ति मार्फत बताएको छ ।